तिथि मेरो पत्रु »5कुकुर मैत्री विचार एक पहिलो तारीख लागि
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 24 2020 |2मिनेट पढ्न
भने लामो भरिएको पहिलो तारीख को विचार, तिनीहरूले तपाईंलाई मन छैन खानुअघि रोक अप्ठ्यारो pauses र कुराकानी, त्यसपछि आफ्नो र आफ्नो मिति गरेको कुकुर पनि समावेश छ भनेर एक पहिलो तारीख योजना विचार. आफ्नो कुकुर ल्याउने खाडी मा अप्ठ्यारो चुपचाप राख्न र तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व मा एक खोतल्न दुवै दिन सक्छ. तर तपाईं कहाँ जानुपर्छ? यी पाँच कुकुर-अनुकूल मिति विचार विचार.
एक कुकुर-अनुकूल रेस्टुरेन्ट मा खाना: एक रेस्टुरेन्ट मा खाने हथियाने एक पहिलो तारीख लागि एक राम्रो-थोत्रो विचार छ. त्यसैले कुकुर-अनुकूल रेस्टुरेन्ट मा भोजन गरेर यो एक मोड थप्न? आफ्नो क्षेत्र मा एक कुकुर-अनुकूल रेस्टुरेन्ट पत्ता लगाउन, आफ्नो मनपर्ने खोज इन्जिन प्रयोग वा सुझाव लागि आफ्नो मनपर्ने कुकुर बुटीक स्टोर सोध्न.
एक बाहिरी कन्सर्ट उपस्थित: यो लोकप्रिय ब्यान्डको हिट खेल एक कवर दल गर्न नाच वा एक कोठामा वाद्यवादन सुनेर होस् शास्त्रीय संगीत खेल्न, एक पहिलो तारीख मा एक बाहिरी कन्सर्ट उपस्थित आफ्नो कुकुर समावेश गर्न एक ठूलो तरिका हो. हुनसक्छ भने, एक पिकनिक टोकरी ल्याउन र केही कुकुर-अनुकूल व्यवहार समावेश, पनि. बस कन्सर्ट स्थल कुकुर अनुमति दिन्छ पक्का; उनीहरूले उपस्थित सक्दैन मात्र पत्ता लगाउन आफ्नो pooches संग आने चाहँदैनन्.
खुट्टा मा आफ्नो शहर को अन्वेषण: मौसम रुचाउनुहुने छ भने, त्यसपछि एक प्रमुख निशानीको मा आफ्नो कुकुर संग बैठक र क्षेत्र घुम्न विचार. एक आराम तरिका छ हिंड्नु प्रत्येक अन्य जबकि पनि आफ्नो कुकुर आफ्नो व्यायाम दिने चिन्न. यो poop बैग भुल्ने छैन!
एक कुकुर पार्क मा भेटें: एक आकस्मिक र छिटो पहिलो तारीख लागि, स्थानीय कुकुर पार्क मा आफ्नो कुकुर संग बैठक सुझाव. पकड को एक खेल खेल्दाखेल्दै तपाईं र तपाईंको कुकुर व्यायाम प्राप्त गर्न सक्छन्. कुकुर पार्क मा बैठक शिथिल मिति राख्छ, पनि; तपाईं यसलाई हिट भने, तपाईं खाने को लागि बाहिर शीर्षक सुझाव सक्छ, तर झिल्काहरू ठीक उडान छैन भने, तपाईं बस टाउको घर सक्छ. तपाईं र तपाईंको कुकुर को लागि हात मा पानी को बोतल राख्नुहोस्, आफ्नो कुकुर को लागि र सायद केही व्यवहार. तपाईं कि पट्टा समातेर अघि, यद्यपि, कुकुर पार्क एक विशेष लाइसेन्स वा ट्याग आवश्यकता भने हेर्न पहिलो जाँच, वा तपाईंले पहिल्यै एक शुल्क तिर्नुपर्छ भने.
एक कुकुर क्लिनिक उपस्थित: यो आफ्नो कुकुर संग तैयार मा सुझावहरु या एक फिटनेस वर्गले एक वर्ग होस्, एक ठूलो तरिका तपाईंको मिति एक कुकुर-केन्द्रित क्लिनिक छ उपस्थित एक आराम र आरामदायी सेटिंग मा प्रत्येक अन्य चिन्न. आफ्नो क्षेत्र मा एक कुकुर क्लिनिक पत्ता लगाउन, तपाईं आफ्नो स्थानीय ढाट वा विशेषता कुकुर स्टोर जाँच गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
विशेष कसैले र आफ्नो कुकुर संग एक पहिलो तारीख योजना जब, निश्चित उनीहरूले आफ्नो कुकुर ल्याउन सहज महसुस गर्न. केही कुकुर भीड वा अन्य कुकुर संग रुचाउनुहुने नहुन सक्छ.